Abdalfattah al-Burhan ayaa casuumad ka helay dhiggiisa Recep Tayyip Erdogan inuu booqdo… – Hagaag.com
Abdalfattah al-Burhan ayaa casuumad ka helay dhiggiisa Recep Tayyip Erdogan inuu booqdo…
Golaha Siyaadada Suudaan ayaa sheegay in madaxweynahooda, Abd al-Fattah al-Burhan, uu casuumaad ka helay Jimcihii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, si uu u booqdo Ankara, taariikh aan wali la cayimin, kadib Burhan oo khadka telfoonka kula xiriiray Erdogan.
Sida lagu sheegay bayaan uu soo saaray Golaha Siyaadada Suudaan, labada dhinac ayaa waxay isla soo qaadeen xiriirka labada dal iyo arrimaha heerka gobol iyo heer caalami.
Erdogan ayaa dhankiisa carabka ku adkeeyay sida dalkiisu u doonayo xoojinta xiriirka uu la leeyahay Suudaan, gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha, maalgashiga iyo ganacsiga, sida lagu sheegay bayaanka.
Horraantii Jimcihii, Waaxda Isgaarsiinta ee Madaxtooyada Turkiga waxay sheegtay in Erdogan uu kala hadlay Burhan xiriirka labada dal iyo arrimaha gobolka.
Sagaalkii bishii December ee la soo dhaafay, Turkiga iyo Suudaan waxay carrabka ku adkeeyeen muhiimadda ay leedahay in la dhaqaajiyo heshiisyadii ay kala saxiixdeen labada dal, warqadii isfahamka iyo qaababka iskaashiga ee wadajirka ah.
Heshiisyada la soo gabagabeeyay 2017 waxaa ka mid ahaa iskaashiga dhinacyada beeraha, warshadaha iyo ganacsiga, marka lagu daro heshiis ku saabsan dhanka warshadaha birta, iyo dhinacyada sahaminta tamarta, iyo kuwa kale oo la xiriiray horumarinta iyo soo saarista dahabka.
Waxa kale oo ka mid ahaa heshiis is afgarad ah oo ku saabsan iskaashiga aasaasida haamo loogu talagalay hadhuudhka, adeegyada caafimaadka, ka soosaarida kuleylka dabka iyo korantada, iyo waliba dhinaca waxbarashada.
Xiriirka ka dhexeeya Ankara iyo Khartuum ayaa soo kobcayay labaatankii sano ee la soo dhaafay, gaar ahaan tan iyo markii Xisbiga Cadaaladda iyo Horumarka (AKP) uu la wareegay xukunka Turkiga sanadkii 2002, kaasoo soo saaray qorshe hami leh oo kor loogu qaadayo xiriirka qaaradda Afrika.
Xiriirka labada dal ayaa sidoo kale laga dareemay dhaqdhaqaaq ballaaran tan iyo booqashadii Erdogan ee Suudaan bishii December 2017, markii ay labada dal kala saxiixdeen 22 heshiis iyo heshiisyo is afgarad oo dhinacyo badan lahaa.